waafaqsan yahay daaqadaha 10
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #344
Is FSX la jaan qaada daaqadaha 10?
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada ..
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #345
Haa, waxay ka shaqeysaa Windows 10. Runtii waan isticmaalayaa FSX Windows 10 si fiican ayeyna u shaqaysaa.
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #346
Haddii aad qabto arrimaha kasta, this site caawin kara. Friend of Mine waxaa socda Edition Steam oo waxaa haysta dhibaatooyin qaar ka mid ah.
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #347
Gh0st ,,, helay su'aal aad u ,,,
Waxaan hayaa nooca FSX Daabacaadda 'GOLD Edition' sanduuqa CD-ga ee Microsoft laga soo bilaabo sannado muuqaal ah oo muuqan.
Waxaan ahay adigoo isticmaalaya version in tan iyo inta dheer oo ku saabsan PC a ka weyn oo aad rabto in aad hesho
ka FSX galay my dhamaadka dhamaadka sare sare kaliya PC ee aan hadda haysto. Waxaan ka fakaraayey inaan helo cudurka 'STEAM' FSX nooca,,,
laakiin waxaan rabaa in aan hubiyo in aan ku qanacsanaado in STEAM-gu guurto taas FSX GOLD Edition nooca sanduuqa CD-ga ah ee aan haysto
shaqada caadadiisu on Win 10 inaan on my dhamaadka sare cusub NEW PC Sim.
Waan u bartay FSX Nooca G Box Editon CD Box ma shaqeynin hadaan rabno inaan haysano FSX Daabacaadda GOLD on
a PC cusub Win 10.
Su'aasha, wali ma isticmaali karaa sanduuqa CD-ga FSX Nooca GOLD Edition ee kuyaala PCVga cusub ee Win 10 sare dad badan
sanadaha soo socda,, ama waa inaan u beddelaa nooca STEAM ee FSX ?
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray Colonelwing.
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #348
Daacadii nin, Ma hubo. edition Gold Your weli shaqeeyaan WAA waxa aan akhriyey halkan
Waxaan weli socda Windows 7 on My desktop weli, iyo isticmaalka Gold Edition.
Colonelwing qoray: Gh0st ,,, helay su'aal aad u ,,,
sanadaha soo socda,, ama waa inaan u beddelaa nooca loo yaqaan "STAEM" ee FSX ?
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #349
Thanks si ka badan Gh0st!
Haa, waxaan u maleynayaa in weli shaqayn doonaa ganaax ,, sida aan siinin isticmaalin wax live online duulaya la version oo had iyo jeer u duuli offline.
Kani maahan addons sida aanan ugu isticmaalin aniga FSX files,, I load addons Diyaaradaha duqeeya oo kaliya inay tijaabiyaan ka dibna daadiyaan
dami kombuyuutarradayda ama geli cinwaanno 'zipfile' ah oo aan ku sii jiro illaa aan ka dareemayo inaan mar labaad ku duulayo iyaga FSX sim faylasha mar labaad.
Ujeeddadeyda ugu weyn ayaa ah inaan dib-u-hawl geliyo PMDG B737NGX oo ah nooca 'sanduuqa' DVD-ga ah oo aan u beddelo PC-ga ugu dambeeya ee sare ee aan hadda u isticmaalo Simulators kaliya. Marka waxaan qiyaasayaa inay waxkasta ii hagaagi doonaan sidii aan ka akhriyey STEAM,, isbadal badan ma aysan sameynin mana saameyn doonto sida aan u duulay FSX muddo aad u dheer mustaqbalka.
Hadda sida aan ku jirno FSX sim subject ,,, for my PC Win10 ee cusub, ,,, Waxaan raadinayay HOTAS ul weyn iyo dhejis
in aad bay u shaqeeya. Sidii jir Logitech waa sii diyaar u ah ka badan ,, laakiin sannadahan badan oo ka mid ah oo duulaya wanaagsan i siiyo.
waxaad ii qor karaa qaar ka mid ah HOTAS aad ka fiirsan doono, waayo, in la isticmaalo for periode fiican sano arrimaha ama dhibaatooyin ka soo ,, meen QControl u leeyihiin in ay noqon dhamaadka totaly weyn ama ugu sareeya.
Waan ogahay fiew ah suuqa ,,, laakiin waan jeclaan lahaa in aan maqalo dhinac ee sheekada ku saabsan HOTAS aad igu tilmaami lahaa.
dadyowga kale oo dhan jawaabi karo oo ku saabsan waxa ay noqon doontaa HOTAS ku habboon inaan u fiirsado si ay u isticmaalaan sida tijaabo ah PRO.
Kasta TAG qiimaha ,, arrinta arkaan xiodhiidhada jacayl igu ...
Thanks for wadaago aad dhibic of view iyo waayo-aragnimada in arrinta HOTAS in ...
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #350
kaliya "online" duulaya waxaan samayn run ahaantii la isticmaalayo software duulimaadka raadraaca lol haddii aad u tagto halkan , Aad arki doonaa My duulimaadka, iyo kuwa kale, kuwaas oo ay sidoo kale duulaya. KDFW - LFRG - KDFW waa wadada caadiga ah My lol ah "bixiso" waa quruxsan hufan lol
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #351
My duulimaadka, iyo kuwa kale, kuwaas oo ay sidoo kale duulaya. KDFW - LFRG - KDFW waa wadada caadiga ah My lol ah "bixiso" waa quruxsan hufan lol
lacagbixinta waa hufan eh ,,, lol
Sida Xusuuso, anigu weligay ma online duulaya ,, oo dhan cusub ii. Laakiin ma cusub ii dunida oo duulaya dhabta ah ,, sidoo glade mushaharka wadada in ,, lol
Thanks for this ila wadaaga ku beermaan ,, Shifo!
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #352
Colonelwing qoray: My duulimaadka, iyo kuwa kale, kuwaas oo ay sidoo kale duulaya. KDFW - LFRG - KDFW waa wadada caadiga ah My lol ah "bixiso" waa quruxsan hufan lol
My Information VA ee haddii aad guji Account Balance, iyo samayn xisaabta, aad arki doonaa waxaan samaynta VA ee qaar ka mid ah lacag caddaan ah hufan. Waxaan mar walba ka mid ah waxa aan ka dhigi doonaa sida tijaabo ah, tan iyo markii aan u muuqdaan in ay u isticmaalaan in ay ku caawiyaan lacag Shimbiraha sidoo
Haddaba haddaad kaliya aniga sameynta in badan oo RL lol
waafaqsan yahay daaqadaha 10 sano 3 4 bilood ka hor #356
Thanks for sharing saaxiibkiisa link!
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.319